‘कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हुँ भन्दा लाज हुने स्थिति आइसक्यो’ - नेपाल एक्सन Online News Nepal
देश प्रदेश १ विचार समाचार
‘कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हुँ भन्दा लाज हुने स्थिति आइसक्यो’
विराटनगर । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मनमोहन र भरतमोहन अधिकारी दाजुभाइको योगदान ठूलो छ । २५ वर्षअघि सरकारमा पुग्दा दाजुभाइले सुरु गरेको वृद्धभत्ता अहिले हरेक दलको महत्वपूर्ण चुनावी एजेण्डा बन्ने गरेको छ ।
नेपालमा पहिलो पटक कम्युनिस्ट दललाई सरकारमा पुर्‍याएको श्रेयको प्रमुख भागीदार यी अधिकारी दाजुभाइको परिवारका कोही सदस्य पनि अहिले पूर्णकालीन राजनीतिमा छैनन् । भरतमोहनकी माइली छोरी लिमा अधिकारी व्यवसायसँगै थोरै भएपनि पार्टी गतिविधिमा संलग्न छिन् ।
नेताहरुको शैली र गुटले राजनीतिलाई विकृत बनाइरहेको, नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रति वितृष्ण पैदा गराएको र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले त कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुँ भन्न पनि गाह्रो बनाएको उनको अनुभव छ ।
प्रस्तुत छ, लिमा अधिकारीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भरतमोहन अधिकारीको योगदानलाई कसरी सम्झन सकिन्छ ?
हिजो उहाँहरुले एउटा उचाईमा पुर्‍याउनुभयो । हामीले पहिले देखेको कम्युनिस्ट आन्दोलन स्पष्ट दिशामा थियो, जसलाई अहिले विकृत पारिदैछ । यो अवस्था देख्दा उहाँको पुस्ता सच्चा कम्युनिस्ट हुनुहुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ ।
उहाँ राजनीतिमा सक्रिय रहँदाको समय कसरी सम्झनु हुन्छ ?
नेपाली जनताले हरेक आन्दोलनमा साथ दिए । कहाँ त्रुटि भयो भने हरेक आन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धी सीमित नेतामा केन्द्रित भए । ठूलो जमातले उपलब्धी उपभोग गर्न पाएन । नेताहरुले ठूलो जमातलाई समेटेर लैजान सकेनन् ।
हाम्रो घर पहिल्यैदेखि यही विराटनगर-१० मा हो । बुबा भूमिगत हुनुहुन्थ्यो, कताकता जाने टुङ्गै नहुने । उहाँलाई एकदमै कम भेट्न पाउथ्यौं । भेट हुँदा धेरै–धेरै माया गर्नुहुन्थो । टोलमा छोराछोरीलाई भरतमोहन अधिकारीले जसरी माया गर्नुपर्छ भनिन्थ्यो ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मनमोहन–भरतमोहन अधिकारीको विरासत थाम्न छोराछोरी अगाडि आउनुभएन नि ?
राजनीतिमा जो आएपनि सही मान्छे आउनुपर्छ भन्ने मुख्य विषय हो । तर अहिले विकृति, विसंगति ज्यादा छ । गालीगलौच व्यापक छ, सिद्धान्त केही छ जस्तो देखिदैन । अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन असल युवा आउनुपर्छ ।
म १८ वर्षदेखि ‘हस्पिटालिटी बिजनेस’मा छु । परिस्थिति बने हाम्रो परिवारबाट म राजनीतिमा आउँछु । विरासतको लाभ पाइन्छ भन्ने कुरामा भने म विश्वास राख्दिन । क्षमतामा विश्वास गर्छु । अहिले पनि पार्टी सदस्य छु । समाजसेवामा पनि संलग्न छु ।
अहिलेको जमात राजनीतिबाटै पैसा कमाउनतर्फ लाग्यो । मैले चाहिँ ‘बिजनेस’बाट कमाएकै छु । कोही पार्टीमा किन लाग्ने ? कमाउने भए अरु काम गरे भयो । राजनीतिक कार्यकता त निश्वार्थ भावनाले पार्टी र जनताको सेवामा लाग्नुपर्छ । अब राजनीति स्वच्छ हुनपर्छ, युवा पुस्ता आउनुपर्छ भन्ने मेरो ध्येय हो ।
राजनीतिमा तपाईंको पूर्ण आगमन चाहिँ कहिले होला ?
अखिल नेपाल महिला संघमा पहिल्यैबाट छु । पार्टीको सदस्य छु । कुनै पद लिएर नबसेको मात्र हो । अब चाहिँ जिम्मेवारी पनि लिने मन छ ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कम्युनिस्ट आन्दोलन पतनतर्फ जाँदैछ भन्ने संकेतको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ?
नेपाली जनताले हरेक आन्दोलनमा साथ दिए । कहाँ त्रुटि भयो भने हरेक आन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धी सीमित नेतामा केन्द्रित भए । ठूलो जमातले उपलब्धी उपभोग गर्न पाएन । नेताहरुले ठूलो जमातलाई समेटेर लैजान सकेनन् । राज्य सञ्चालनमा ठूलो तप्का र क्षेत्रको सही प्रतिनिधित्व हुन नसकेको अवस्था छ ।
फेरि, अहिले राजनीतिलाई नै कमाउने भाँडो बनाइएको छ । एउटा किसिमको पहिचान बनाएका, राजनीतिलाई कमाउने माध्यम बनाउन मिल्दैन भन्ने भावना भएकाहरु अब अगाडि आउनुपर्छ । नसच्चिने हो भने त नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन पतन नै हुन्छ ।
२०५१ सालयता नेपालका हरेक चुनावमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सबै दलले चुनावी मुद्दा बनाउने गरेका छन् । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री र भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा यसको सुरुवात भएको थियो । उहाँहरु निकै दूरदर्शी हुनुहुँदो रहेछ हैन ?
आफ्ना बुबाहरुप्रति धेरै आग्रह राखेर बोलेको जस्तो सुनिएला, तर उहाँहरुको सोच धेरै दूरदर्शी रहेको प्रमाणित भएको छ ।
त्यसबेला वृद्धभत्ता जम्मा एक सय रुपैयाँ थियो । त्यसलाई कुनै सरकारले काट्न सकेन, बरु बढाउँदै लैजानुपर्‍यो अहिले पाँच हजारसम्म दिने कुरा छ । बुढाबुढीका लागि पाँच हजार भनेको राम्रो ‘पकेट मनी’ हो ।
भरतमोहन अधिकारीले कम्युनिष्ट आन्दोलनबारे के भन्नु हुन्थ्यो ?
उहाँलाई जीवनको अन्तिम अवस्थामा दुई महिना अस्पताल राख्यौं । त्यसबेला उहाँले ‘यो पाली मलाई उठायौं भने दुई–तीन वर्ष बाच्छु, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठूलो अवसर आएको छ’ भन्नुहुन्थ्यो ।
वृहत कम्युनिस्ट एकताबाट जनहितको काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको सोच थियो । राजनीतिबाट विश्राम लिनुभएको थियो, तर मिटिङमा कतिबेला जाउ भनेजस्तो गर्नुहुन्थ्यो । पार्टी एकता हुँदा उहाँमा ठुलो उत्साह आएको थियो ।
पार्टी एकता र चुनावी जित पछि त स्वार्थको राजनीति भयो नि हैन ?
पार्टीलाई विकृतिले गाँजेको छ । यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विकृत बनाएको छ । पार्टी नेताहरुको अभिव्यक्तीले कार्यकर्तालाई लज्जित तुल्याइरहेको छ । म नेकपाको शुभचिन्तक हुँ, सदस्य हुँ भन्दा नै लाजमर्दो हुने अवस्था आएको छ । यो वातावरण त साह्रै भएन ।
कार्यकर्ताहरुले पनि अब त गुट–उपगुटलाई साथ दिनु भएन । विवेक, सिद्वान्त, एकता र सहमतिको पक्षमा उभिनुपर्‍यो ।